Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa sứ trong chậu nở đúng dịp tết | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Đang Đọc: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa sứ trong chậu nở đúng dịp tết | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Izityalo ze-porcelain zikhule kwiimbiza ngokulula, ngenxa yeempawu zazo ezilula ukuzikhulisa, abantu abaninzi bakhetha ukuzikhulisa kwiimbiza. Kodwa ubuchule bendlela yokwenza umzobo okhethekileyo womthi kunye nendlela yokunyamekela umthi ukuqhakaza ngexesha leTet yinto ekungekho mntu unokuyenza. Inqaku elilandelayo liya kukunceda ngokuyinxenye ukusombulula ezi ngxaki zingasentla.
Porcelain intyatyambo imbiza
1 1. Ukuqaliswa kwesityalo sentyatyambo ye-porcelain
2 2. Iingqayi zeentyatyambo zePorcelain
3 3. Umhlaba wokutyala iintyatyambo zeporcelain
4 4. Indlela yokukhulisa izityalo zeporcelain kwiimbiza
5 5. Ukubumba imbiza yentyatyambo yeporcelain
6 6. Lawula iintyatyambo kwiimbiza zeporcelain
7 7. Ukuchumisa izityalo zeporcelain
8 8. Nkcenkceshela imbiza yeentyatyambo eyenziwe ngeporcelain
9 9. Ukuthintelwa kwezinambuzane kunye nezifo zeentyantyambo ze-porcelain
1. Ukuqaliswa kwesityalo sentyatyambo ye-porcelain
– I-porcelain sisityalo esilula ukukhula, sinamandla okusasaza ngokukhawuleza, sinika iintyatyambo ezintle, kumthi omnye unokudibanisa iindidi ezininzi ze-porcelain ezinemibala eyahlukeneyo. Ukongeza kubuhle beentyatyambo, izityalo ze-porcelain zinokugotywa ukwenza izityalo zokuhombisa kunye nokuthatha indawo ngenxa yeengcambu zazo ezintle kakhulu. Ke ngoko, iintyatyambo zeporcelain zithandwa ngabantu abaninzi kunye nabalimi beentyatyambo kuba izisa ukusebenza kakuhle kwezoqoqosho.
2. Iingqayi zeentyatyambo zePorcelain
– Abantu bahlala bekhetha ukutyala i-porcelain kwiimbiza zokuhombisa kuba kulula ukuyinyamekela, kulula ukuyidala izityalo kunye nokuhle ngaphezu kokutyala egadini.
– Ukutyala embizeni, kuya kuba lula kuwe ukuhambisa iingcambu kwimbiza entsha kunokuba utyala egadini. Ukuba utyala egadini, kunzima kakhulu ukuhamba xa ufuna ukuyihambisa embizeni. Ukutyala ixesha elide, iingcambu zentyatyambo ye-porcelain ziya kukhula, ngoko ke kufuneka utshintshe imbiza ibe yinto enkulu ukuze iingcambu zibe nendawo yokukhula. Khumbula xa usiya embizeni entsha, kufuneka uphakamise iingcambu phezulu ngaphezu komlomo wembiza ukuze imbiza entsha yeentyatyambo yeporcelain ibe nemilo entle.
Ngebhodwe, kufuneka uqinisekise ukuba umngxuma wokukhupha amanzi uhlala uphuma umoya, ubukhulu bebhodwe kufuneka bufanelekele iingcambu. Kufuneka ubale indawo eninzi ukuze iingcambu zikhule. Okwangoku kwimarike kukho iimbiza ezininzi onokuthi ukhethe kuzo, unokukhetha kwiimbiza zodongwe, iimbiza zeporcelain okanye iimbiza ezintsha zegreenbo ezinokugcina indawo kwaye zihombise ibalcony yakho.
3. Umhlaba wokutyala iintyatyambo zeporcelain
– Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, izimbiza zeentyantyambo ze-porcelain zilula ukukhula, ngoko ke ngokubhekiselele kumhlaba, unokukhetha naluphi na uhlobo lomhlaba xa nje umhlaba unamanzi kwaye uhlanjululwe kakuhle ukukhusela ukuchithwa kwamanzi kwizityalo.
– Kunokwenzeka ukuxuba umhlaba we-porcelain ngolu hlobo lulandelayo: 40 – 50% umhlaba we-alluvial, isanti edibeneyo okanye inyama elula, i-50 – 60% yezinto eziphilayo ezifana ne-coir ebolileyo, amaqokobhe e-peanut abolileyo, amakhoba erayisi. Ukuba umhlaba une asidi, kungagalelwa izichumiso ze lime kunye ne phosphate. Zonke zixutywe kakuhle kwaye zinyangwe ngamayeza athile okubulala umngundo ukuze kubulawe iintsholongwane, zifukanywe kwiimfumba ukuze zisetyenziswe ngokuthe ngcembe.
– Unokukhetha kwakhona ukuthenga imidiya kubalimi abahloniphekileyo abanezondlo ezaneleyo zokuxuba kunye nomhlaba wokukhulisa iintyatyambo ze-porcelain, ngoko uya kuba ngumsebenzi omncinci.
4. Indlela yokukhulisa izityalo zeporcelain kwiimbiza
– Kukho iindlela ezimbini zokukhulisa i-porcelain: ukuhlwayela imbewu kunye nokusikwa. Kodwa okwangoku, uninzi lwabadlali be-porcelain basebenzisa indlela yokusika.
– Abatyali beporcelain kufuneka babe nemingxunya ezantsi ukukhupha amanzi, banokubeka ilitye elincinci, izitena ezincinci ezantsi kwembiza, baphephe ukwenza umhlaba wokubumba uvale umngxuma, okanye iingcambu zeporcelain ziphume kumngxuma wokuhambisa amanzi, zikhule. phezulu ukuvala umngxuma ixesha elide.
– Sebenzisa iCompomix Dau Trau umhlaba weentyatyambo zokuhombisa ukugcwalisa ukuya kuthi ga kwi-2/3 yembiza, emva koko ubeke isityalo seporcelain, silungise embindini wembiza, iingcambu zisasazeke ngokulinganayo. Qhubeka ukongeza umhlaba ukuze umhlaba ugutyungelwe kuphela ngeengcambu kwaye umalunga nenqanaba elifanayo nomphezulu wembiza. Ukuba kukho isethi yeengcambu ezinkulu, kufuneka zilale phezu kwebhodwe, umhlaba kufuneka ube ngaphantsi komlomo webhodwe, ukwenzela ukuba xa unkcenkceshela, ungaphumi.
5. Ukubumba imbiza yentyatyambo yeporcelain
– Izityalo ezikhule iminyaka eyi-1-2 zineengcambu ezinkulu, abalimi kufuneka bagobe kwaye bazilungise ukuba zihle. Iingcambu ze-porcelain zilula kakhulu ukulungiswa, ngakumbi izityalo ze-porcelain ezikhuliswe kwimbewu zihle ngakumbi kuba akukho sinqeni phakathi kwesiqu kunye neengcambu ezifana ne-porcelain cuttings okanye i-cuttings. Izityalo ze-porcelain ezikhule ukusuka kwimbewu zineziqu kunye neebhalbhu ezinamathela kunye njengomntu omileyo, oleleyo, okanye oguqayo. Rhoqo ngonyaka kwixesha elomileyo, ngemvula encinci, kunokwenzeka ukuphakamisa yonke inkqubo yeengcambu ngaphandle kwembiza ukuthena indawo entle ngakumbi. Khumbula ukuwayeka amanxeba aphole phambi kokuba utyale ngokutsha.
Ukubumba umthi wentyatyambo yeporcelain
Imisebenzi esisiseko xa usenza
Inyathelo loku-1: Khupha isityalo se-porcelain ebhodweni, ukhuphe umhlaba ojikeleze ii-tubers ngentonga ye-bamboo, kunqande ukukrwela iibhobho kunye nokuqhekeza, ukunyathela iingcambu. Sebenzisa umbhobho wokutshiza (ukuhlamba umhlaba obambelele ezingcanjini).
Inyathelo lesi-2: Sebenzisa imela ebukhali okanye i-razor ukuthena isebe le-porcelain kwisimo esifunwayo kwaye kwangaxeshanye usike iingcambu ezincinci ezijikeleze i-tuber, inxalenye esiya kukhula kamva.
-Sika iingcambu ezincinci ezingqonge izithupha zeengcambu, ukuze usincede siphephe into yokubola kweengcambu zebran xa uphinda utyalwa embizeni, ngenxa yokutyunyuzwa.
-Zonke iinqumlo kunye neengcambu zihlanganiswe ne-pesticides (i-Vicarben, i-Aliette …) okanye i-lime e-slaked, ipeyintiwe, ukumisa iinqumle kwaye ugweme isifo sokubola emva kokuphinda utyalwe kwiimbiza.
Inyathelo lesi-3: Hlanganisa isityalo se-porcelain, somise kwindawo enomthunzi iintsuku ezingama-5-10, ukwenza ukusika kome kwaye kuphilise. Nika ingqalelo ekuxhonyweni kwindawo epholileyo, eyomileyo, kungekhona kwindawo apho kukho ilanga elithe ngqo, eliya kubangela ukuba umthi we-porcelain utshiswe kwaye wonakaliswe ngoku kutsha.
Inyathelo lesi-4: Yizisa imbiza ye-ceramic kwimbiza esele imiselwe, izinto zixhomekeke kukhetho lwakho lomhlaba othe wankcenkceshelwa ngokwaneleyo ngaphambi kokutyala, kwaye emva kokutyala, beka imbiza ye-porcelain kwindawo enelanga engama-50% (ilanga lasekuseni kwiveranda), ukwenzela malunga neentsuku ezili-15-20 de sibone iitreyi zeporcelain ziqala ukuhluma ekusikeni. Ngethuba lokuqala – ukusuka ekutyaleni ukuya ekuhlumeni – sinkcenkceshela kuphela kancinci kumhlaba ongaphezulu ukuba uvakalelwa kukuba womile, ukugcina ukufuma, kungekhona phezu kwamanzi kuba kulula ukubola ngenxa yokuba isityalo se-porcelain asinamagqabi ngeli xesha, ukufunxa kwamanzi aMabi, ukuba i-hydrated, isityalo se-porcelain sinokubola lula.
Inyathelo lesi-5: Xa imbiza ye-porcelain iqalile ukuhluma, lixesha lokushiya isityalo se-porcelain kwindawo enelanga ye-80-100%: Kweli nqanaba sinokunkcenkceshela ngokuqhelekileyo. Xa umhlaba womile nje, umaleko ophezulu. Qaphela ukuba ngeli xesha, umthi we-porcelain kulula ukuba ube neentshulube kuba kukho amahlumela amaninzi amancinci. Eyona ndlela ingcono kukuqokelela amaqanda kunye nokubamba iintshulube ezisanda kuvela kunokusebenzisa iyeza, kuba kulula ukutshisa amaqabunga amancinci e-porcelain.
Ngeli xesha, sisebenzisa i-NPK 20-20-20 isichumisi sifanelekile de amaqabunga amaqabunga akhule ngokupheleleyo. Ukuya kwi-10 cm ubude, sitshintshela kwisichumisi se-NPK 15-30-15 okanye 20-30-20 ukutshala.
– Faka kuphela isichumiso se-organic xa isityalo se-porcelain sinamahlumela amancinci kwaye sinamagqabi apheleleyo. Ngenxa yokuba ukuba isetyenziswe kwangoko, iingcambu ezincinci zitshiswa lula, zichaphazela ukukhula kwesityalo.
Inyathelo lesi-6: Emva kokusika, kwinkqubo yokuhluma komthi we-porcelain, ukuqala kweentyatyambo, ukunyamekelwa kokunkcenkceshela imihla ngemihla, ukuchumisa ngezikhathi ezithile, kunokuhlala ngaphezu kweenyanga ezi-6. Xa uthuthu luqala ukuphulukana nokumila kwalo, amasebe abe made aze awe, sinokuwaphatha ngendlela awayeyiyo okanye siwagawule aphinde amile kodwa singazitshintshi iimbiza nomhlaba omtsha.
6. Lawula iintyatyambo kwiimbiza zeporcelain
– Ukuba ufuna umthi we-porcelain ube neentyatyambo ezininzi, musa ukuvumela isebe le-porcelain libe lide kakhulu, isebe kufuneka lisikwe emva kokuba i-wave ngalinye leentyatyambo liphelile, lisikwe amaxesha amaninzi, ixesha ngalinye linqumle ubude obufutshane, amacandelo amaninzi amafutshane. Kuya kubakho amasebe amaninzi, amasebe amaninzi, iintyatyambo ezininzi. Ukuze i-porcelain ibe neentyatyambo ngeholide yeTet, kuyimfuneko ukuseka:
Lawula imbiza yentyatyambo yeporcelain ukuze idubule ngexesha leTet
+ Ukuba imvula ihlala rhoqo unyaka wonke, imozulu ithambile, ke usike amasebe eporcelain kwinyanga epheleleyo yenyanga yesi-7.
+ Ukuba enyakeni kukho ilanga elininzi, imvula encinci, nembalela yexesha elide, sike amasebe e-porcelain kamva ekuqaleni kuka-Agasti. , Buffalo Head 701, Buffalo Head 901.
– Xa ubona amagqabi eporcelain ejika abe luhlaza abe tyheli aze awe, kwincam yentshula yeka ukuphuhlisa amagqabi amatsha anamaqhakuva, elixesha apho umthi wenza amathupha.
7. Ukuchumisa izityalo zeporcelain
– Zonke iintlobo zezichumisi ze-organic okanye ze-inorganic zifanelekile ukukhula kweengqayi zeentyatyambo ze-porcelain. Ungabhekisa kwindlela yokuchumisa ngokwedosi engezantsi ngokuxhomekeke kwiminyaka yomthi:
– Izityalo ze-porcelain ezingaphantsi kweenyanga ezi-6 ubudala: Eli lixesha lokuvuselela amahlumela, amagqabi kunye neengcambu, ngoko ke kuyimfuneko ukuhlambulula i-10-15g ye-NPK 20-20-15 + TE okanye i-NPK 16-12-8 + TE ye-10- Iintsuku ezili-15. ilitha yamanzi okunkcenkceshela ifumile ngokwaneleyo, malunga neentsuku eziyi-15-20 ukusuka / ngexesha. Ukusetyenziswa okudityanisiweyo kwesichumiso samagqabi i-Dau Trau 005 sitshizwa ngamaxesha athile rhoqo emva kweentsuku ezisi-7-10.
– Izityalo ze-porcelain ukusuka kwiinyanga ezi-6 ukuya kwi-1 ngonyaka: Ngezihlandlo sebenzisa i-20-30 gr ye-NPK 20-20-15 + TE okanye i-NPK 16-12-8 + TE / imbiza, iintsuku ezingama-20-30 ngaphandle / ixesha. Ukusetyenziswa okudityanisiweyo kwesichumiso samagqabi i-Dau Trau 005 sitshizwa ngamaxesha athile rhoqo emva kweentsuku ezisi-7-10, sivuselela amahlumela, amagqabi kunye neengcambu. Ungasebenzisa iBuffalo Head 007 ukutshiza xa ufuna ukwenza iintyatyambo zeporcelain.
Izityalo ze-porcelain ngaphezu konyaka owodwa ubudala, kunye neentyantyambo ezizinzile: sebenzisa rhoqo i-20-30 gr ye-NPK 20-20-15 + TE okanye i-NPK 16-12-8 + TE / imbiza, iintsuku ezingama-20-30 ngaphandle / ixesha. Ukusetyenziswa okudityanisiweyo kwesichumiso samagqabi i-Dau Trau 005, sitshizwa ngamaxesha athile rhoqo emva kweentsuku ezisi-7-10, sivuselela amahlumela, amagqabi kunye neengcambu. IBuffalo Head 007 ivuselela ukudumba kwaye iBuffalo Head 009 inesiphumo sokhathalelo lwentyatyambo oluhlala ixesha elide.
8. Nkcenkceshela imbiza yeentyatyambo eyenziwe ngeporcelain
I-porcelain isityalo esingamelana nelanga, esifanelekileyo kakhulu kwimozulu esezantsi, kodwa kwakhona ukwesaba kakhulu ukuchithwa kwamanzi, ngoko ke kuphela xa ilanga lomile, umhlaba uya kunkcenkceshelwa. Izityalo ze-porcelain ezisandula ukutyalwa, zifakwe embizeni okanye zisikwe ukusika akufanele zinkcenkceshelwe kakhulu. Ukunkcenkceshela i-porcelain kufuneka kusetyenziswe imilomo emihle, izitshizi okanye iinkqubo zempompo zokutshiza.
9. Ukuthintelwa kwezinambuzane kunye nezifo zeentyantyambo ze-porcelain
– Iimbiza zeentyantyambo ze-porcelain zilula ukuhlaselwa zizinambuzane, ngoko kufuneka uhlale uqwalasela isityalo ukuze ubone izinambuzane, apho ukhetha khona i-insecticide efanelekileyo. Iintlobo eziphambili zezinambuzane kunye nezifo ezonakalisa iintyatyambo ze-porcelain:
– Iihopper zomqhaphu kunye noqongqothwane weporcelain: Iihopper zomqhaphu zincinci, zithe tyaba, zinefluff eninzi ngeenxa zonke, ooqongqothwane beporcelain bangaphezulu ngokuphindwe kabini kubukhulu obuphindwe kathathu, imizimba embhoxo, nabo bathwele uboya obuninzi kunye nomsila omde, rhoqo. ukuluma ukufunxa incindi kwiingcebiso zeqabunga kwaye ufihle i-resin emnandi ukuba idliwe ziintuthwane, kwaye kwakhona uwise i-chalk eninzi emhlophe phezu kwemithi; Ixesha elide, yonke i-porcelain top iyabola. Iintwala kunye nezinye izinambuzane kwincochoyi yemithi zonakalisa imiphezulu yemithi, kwiziqhamo eziwonakalisayo, ezincinci ziyawa, kwaye iziqhamo ezikhulu zibhuqa imbewu ukuze ingakhuli emva kokuhlwayela. Xa kufunyaniswe ukuba itshizwe ukuthintela ukubekelwa amaqanda. Ukuba iihoppers zibhaqiwe, sebenzisa ibrashi encinci ukosula zombini iihoppers kunye ne powdery mildew Sebenzisa amachiza Vicidi-M 50 ND, Visher 25 ND, Vidithoate 40 ND…
– Iintwala, izigcawu ezibomvu: Izigcawu ezibomvu zinomzimba obomvu, nazo zineenwele ezininzi, kunzima ukuzibona ngeliso lenyama, ukufunxa incindi ephuma kumagqabi amatsha, kubangela ukuba amagqabi amatsha ajike abebomvu-mdaka aze awe, akhuphe amathupha. Chitha kanye ngenyanga ukuze uthintele. Amayeza okubulala izitshabalalisi anokuba: Trebon, Bi 58, Kelthane, Viphensa 50ND, DC Ttron Plus….
+ Unobangela: Inokubangelwa yintsholongwane, xa ukufuma kuphezulu kakhulu okanye ngamanxeba ezinambuzane.
+ Uthintelo: Sika naziphi na iindawo ezithambileyo ezibolileyo, ukuya kuthi ga apho undoqo womthi unamachokoza amnyama, kungenjalo uya kuqhubeka usasaza umthi uphela, ugalele ikalika kwisiqwenga sokubulala iintsholongwane. Sebenzisa iBatocide 12WP, Viben-C, Newkasuran 16.6 BTN…
– Isifo samachaphaza atyheli emagqabini: Amagqabi eporcelain, emva kokuba evezwe yimvula okanye umoya onamandla, akholisa ukuvelisa amachaphaza amancinci amaninzi kumagqabi atyheli okanye amdaka ngokutshisa, aze asasazeke ngokukhawuleza kwigqabi lonke, kamva abune okanye awe. Ngamanye amaxesha ukutya esiqwini kwenza umthi uthambe kwaye ubole ukusuka emasebeni ukuya kutsho esiqwini, xa unwenwela emazantsi, umthi uyafa. Inokubangelwa ngumngundo kwaye isasazeka ngokukhawuleza kwisityalo sonke.
+ Uthintelo: Esi sifo sihlala sikhula ngexesha lemvula, ngoko ke xa amagqabi sele etyheli, kufuneka anqunyulwe kwangoko kwaye atshizwe ngemichiza yokungunda efana neTopsin, Appenearb, Dithane, zineb, copper oxychloride… Izityalo zePorcelain zinzima kakhulu. Ukuhlolwa rhoqo ukuze kuthintelwe kwangexesha.
Nên hay không nên đốt gốc đào? | Hatgiongtihon.net